ARUMUKA BANYERE EBUBO NA NDI AGHA NIGERIA ANAGHI EFU
ANYI KWITA OKWU
IHE GBASARA ANYI
UTUTU OMA NU
IHE N’EME NA OBODO
AHU IKE BU AKU
IGBO AMAKA TOP 10
NDORO NDORO OCHICHI
UMUNWAYI AGBA OHURU
KA ESI EBI NDU
Previous OKWU OBAMA KWURU NA AFO NARI KEMGBE OMUMU MANDELA
Next APC NA-AKPO AKUME NA ỌRTOM GAA NA ABUJA
Hot News, IHE N'EME N'OBODO, Local News, Politics
Ndi agha Naijiria asughariri ndi ozo n’arughi agha Boko Haram na Saturday. Otu akwukwo akụkọ nke News Agency of Nigeria (NAN) kọrọ na ụnyaahụ: “Ọ dịghị ihe ruru mmadụ 23 ndị agha Naijiria ka a ga-agụnye mgbe ndị Boko Haram nọ na-agbagha ndị agha na Boboshe obodo dị na Bama Local Government Area nke Borno.
“Ndị isi ise, ndị agha 18 na ụgbọala asatọ nọ na-efu mgbe agha ahụ rutere n’isi ụtụtụ Satọdee.
APC NA-AKPO AKUME NA ỌRTOM GAA NA ABUJA
“Ndị agha, na-eme ihe na ọgụgụ isi, chịkọtara ndị agha na convoy nke ụgbọala 11 iji kpochapụ ndị agha ahụ si n’obodo ahụ gbapụrụ agbahapụ. E kweere na ndị ahụ na-enupụ isi bụ ndị gbapụrụ n’aka ndị agha na-aga n’ihu site na ndị agha iji wepụ ndị na-eyi ọha egwu na Boko Haram n’akụkụ ọnụ ala nke Sambisa Forest na ógbè Chad.
“Otu onye agha nwere ike ịgwa NAN na ndị omempụ nke otu narị otu narị ndị agha ahụ na-agbagha ndị agha ahụ, na n’ime usoro ọtụtụ n’ime ha enwekwaghị. O kwuru na nani ato n’ime igwe 11 e weghachitere na mpaghara ahu we laghachi na isi ha na Maiduguri, mgbe ha nwesiri nnukwu onu ogugu na ndi agha ahu. ”
NAN na-ekwu na isi iyi ahụ na-ekwu, sị: “Ndị agha na-azaghachi ngwa ngwa mgbe ha natara akụkọ na ọtụtụ narị ndị omempụ gbakọtara na Boboshe na ụzọ Maiduguri-Konduga-Bama. Ndị omempụ ahụ gbaghaara ndị agha ahụ. Naanị atọ n’ime igwe 11 ahụ laghachiri n’isi. O doro anya ihe merenụ ma e chere na ndị agha ahụ na-efu na-esochi ndị mmadụ. ”
IGP IBRAHIM NA-ENYE N5M UGWO MAKA OZI NA COP KILLERS
Ọzọkwa, na-ehota “ebe nchekwa”, AFP na Twitter ụnyaahụ mara ọkwa: “Ọtụtụ ndị agha na-atụ egwu na ndị nwụrụ anwụ mgbe a Boko Haram agha Saturday na agha isi n’ime ime n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ Nigeria.”
Ma na nchikota nke uhuruchi, ndi agha weghaara dika ndi “aghaghi” na ndi nduhie “ndi nduhie” banyere ndi agha na-achoghi agha na ndi agha na agha ndi agha Boko Haram na-achikota na Borno, na-agba ndi mmadu ume ka ha ghara ileghara ya anya.
OSINBAJO SETIPURU INTANETI NA ABU OHURU
Na nkwupụta na Maiduguri, Director, Army Public Relations, Brig. Texas Chukwu, kwuru, sị: “Ndị agha Naijiria na-achọ ikwu n’ụzọ dị mkpirikpi na akụkọ ahụ agbasaghị site n’usoro mgbasa ozi. N’adịghị ka akụkọ ahụ, ndị agha Naijiria na-achọ itinye ihe ndekọ ahụ kpọmkwem banyere nsogbu ahụ ma kwenye na ndị ọha na eze, karịsịa ndị bi n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ, na-eleghara akụkọ ahụ anya, ebe nchekwa ha dị n’aka.
Ndi agha Naijiria choro ikwuputa na e gbaliri imegide ndi agha na Kwakwa na Chingori obodo nke di na Bama nke Borno State site n’onye ajuju na ndi Boko Haram na-eyi egwu n’ihi uzo siri ike ebe ugboala anyi.
“Ndị na-eyi ọha egwu gbalịrị ịkwapụ ụgbọala ndị agha, ma ndị agha anyị na-aga agha na-akwado anyị n’ụzọ dị mma site n’enyemaka nke ndị agha Nigeria.”
Chukwu gosiputara na ndi agha ahu gburu mmadu iri abuo na abuo, ebe otutu ndi ozo gbapuru n’ahu ogbugba. O kwuru na ndị agha na-emewanye mgbalị iji nweta ndị na-agba ọsọ na-eyi ọha egwu.
ONWU NA-ADORO MMASI M KARI KEMGBE ONWU NWUNYE M
O kwuru otu onye agha na onye agha, bụ onye kwadoro mmerụ ahụ na mbuso agha ahụ, na-enweta nlekọta ahụike na ụlọ ọgwụ ndị agha, ma gbaa ndị mgbasa ozi ume ka ha nyochaa eziokwu mgbe niile.
“A ghaghị ịdọ aka ná ntị n’ezoghị ọnụ, karịsịa ugbu a, ndị agha ahụ ederela ọganihu dị ukwuu na mbuso agha agha,” ka Chukwu kwuru, na-agba ndị mmadụ ume ka ha gaa ahịa ha, ebe ọ bụ na agha ahụ nọ n’ọnọdụ ahụ.
Ndi oru nchekwa ozi Afrika, Tomi Oladipo, kwuru, sị: “Ụlọ ọrụ mgbasa ozi, AFP, na-agbaso akụkọ ya na agha nke abụọ jihadist wakpo ndị agha Naijiria ruo ọtụtụ ụbọchị dị egwu karị ma tinye ebe isi agha dị. Ọ na-agbakwụnye na ọtụtụ narị ndị agha amaghị maka agha ahụ.
OBAMA NA AGBA NNE NNE YA NA NJEM KENYA
“Ihe ndị agha Naijiria na-eme ka a ghara ịzaghachi akụkọ a bụ ihe ndabara nke ịda mbà ma ọ bụ ịgọnahụ ọghọm. Ọ chọrọ ka ọ bụrụ isi iyi nke akụkọ site na n’ihu, ma mee ka mgbasa ozi dị ka ndị na-akwado nkwupụta ụgha na enweghị nkwenye.
“E nwewo ezigbo ọganihu agha nke agha na mkpọsa a – mana ike ahụ emetụkwala aka ya na ụfọdụ akụkọ na-ezighị ezi ma ọ bụ akụkọ ụgha. Ọ na-ekwu na ndị bi n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ Nigeria enweghị ihe ọ bụla ga-atụ egwu, mana ọ na-egbochi ịnweta mgbasa ozi na mpaghara ụfọdụ nke mpaghara ahụ. O choro ka ndi oru nta akuko jiri aka ya merie ihe o chere dika ndi agha agha – ma kwusi okwu n’arum aka na ndi agha.
“Ndi agha Naijiria na akowa ndi agha ya dika ndi nwere obi ojoo, ma otutu afo otutu otutu ndi mmadu nwere mkpesa banyere ndi na-adighi ike ma obuna na erighi nri.
“N’agbanyeghi otutu ihe ekwesiri ikwu na o meriri ndi agha Islamist Boko Haram, insurgency abia n’ime afo itoolu.”
army hot iheneme IHENEME NOBODO ihenemenobodo Isimbido ISIMBIDO POST isimbido posts isimbido tv isimbidopost ISIMBIDOPOSTS ISIMBIDOTV LATEST missing new news NIGERIA NIGERIAN nobodo soldier soldiers update
AKUKO UWA, Hot News
Ọ BỤRỤ NA M ANWỤỌ TAA, JIDENỤ ỌCHICHI ETITI – ORTOM
ISI MBIDO UTUTU OMA NWAMGBOKWO OKOYE
K’ANYI KWURITA OKWU Facebook
K’ANYI KWURITA OKWU Twitter
K’ANYI KWURITA OKWU
View isimbidotv’s profile on Facebook
View isimbidotv’s profile on Twitter
View isimbidotv’s profile on Instagram
View isimbidotv’s profile on Pinterest
View isimbidotv’s profile on YouTube
View isimbidotv’s profile on Google+
Ihe Gbasara Anyi Isimbido TV
Ebe Anyi Na
K'ANYI KWURITA OKWU Isimbido TV
Copyright © 2019. Isimbido.tv.